ရွှေဘိုသား: ဒီမိုး ဒီရေ ဒီလူတွေ နဲ့ဒီမင်း ဒီစိုး ဒီသူခိုး
ရေးသားသူ ရွှေဘိုသား on Monday, December 10, 2007 / အကြောင်းအရာကတော့ အတွေးနဲ့အရေး
you did good job. That's right, everyone should know which one is major or minor. We should concentrate on the main objective. We should not waste our time in foolish thing.
We should remember our country's concern and bloody people. Let's try to unity.
hello ko moe htet nay,
i'm agree with you and respect your idea.we have to do unity between pro democracy people and officer and other rant in military.but first of all we have to do unity in ourself.
ရေးထားတာ ကောင်းတယ်ဗျို့ ။ အမှန်တော့ blogger အချင်းချင်း တံဆိပ်တွေ အလွယ်တကူ မတပ်သင့်ဘူးပေါ့ဗျ။ ခွဒေါင်းတို့ ၊ spy တို့ ဆိုပြီး အချင်းချင်းလျှောက်တံဆိပ် လွယ်လွယ်နဲ့ မတပ်သင့်ဘူး။ ဖတ်တဲ့လူတွေမှာ အသိဥာဏ်ရှိပါတယ်။ ဖတ်သူက ဘယ်သူခွဒေါင်း၊ ဘယ်သူ spy လည်းဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ blog တွေကို စနစ်တကျ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ အဖွဲ့http://mmedwatch.isgreat.org/ ရှိပါတယ်။ တကယ်သေချာမှ blacklist ထဲကိုထည့်တာတွေ့ ရပါတယ်။ မသေချာသေးရင် စောင့်ကြည့်စာရင်းထဲပဲ ထည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်မဟုတ်ရင် ကန့် ကွက်နိုင်ပါသေးတယ်။ လုပ်စရာရှိတာကို အဲလိုအဖွဲ့ အစည်းတွေက လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ မသင်္ကာစရာ တွေ့ ရင်လည်း အဲဒီ့ အဖွဲ့ ကို ရိုးရိုးသားသား သတင်းပေးလိုက်ရုံပေါ့။ ကိုယ်က စောင့်ကြည့်ခြင်းမရှိပဲ post တစ်ခုတည်းဖတ်ပြီး အမြင်မတူတာနဲ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်သစ္စာဖောက်နာမည်တပ်တာဟာ ရန်သူတွေရဲ့ ထောင်ချောက်အတွင်းကို သက်ဆင်းမိသလို ဖြစ်မှာပါ။
စည်းကမ်းရှိစွာ သဘောထားကြီးစွာ သဘောကွဲလွဲမှုဟာ စည်းလုံးမှုအင်အားကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။ သဘောထားကြီးတဲ့ debate တွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုမပါတဲ့ ကွဲပြားတဲ့အမြင်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီ ရဲ့ သင်္ကေတတွေပါ။
စည်းလုံးမှုကို ပျက်ပြားစေတာက အချင်းချင်းရန်သူလို သဘောထားပြီး တိုက်ခိုက်နေမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆဲတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ကတော့ ဆဲတာ ကိုနေနတ်နွယ်ရေးဖူးသလို လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေမို့ ဆဲတဲ့လူတွေက တော့ ဘက်တိုင်းမှာရှိနေမှာပါ။
ဆဲတဲ့လူတွေကို ကြည့်ပြီး “ဒီမိုကရေစီ သမားတွေအားလုံးဆဲတယ်၊ ကလေးဆန်တယ်၊ဆဲတာ တစ်ခုပဲလုပ်တတ်တယ်”လို့ ကိုဇော်မျိုးတို့ လိုလူတွေစွပ်စွဲတာကတော့ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းလိုက်တာပါ။ “လူမှာ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်။ ကျီးကန်းမှာလည်းခြေထောက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ကျီးကန်း=လူ” ဆိုပြီးကောက်ချက်ချတဲ့ ဥပမာလို ရယ်စရာကောင်းတဲ့ logic ဖြစ်နေမှာပါ။
ဘာပဲပြောပြောဆဲတာ မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ ထောက်ခံတယ်။ ကိုမိုးထက်နေရေးတဲ့ “ဆဲတာနဲ့ ဒီမိုကရေစီဘာမှ မဆိုင်ဘူး”ဆိုတာကို ထောက်ခံတယ်။ ဆဲခြင်းဟာ စိတ်ဓာတ် အင်အားကို ယုတ်လျော့စေပါတယ်။ တော်လှန်ရေးကို အင်အားနည်းစေပါတယ်။ မဆဲရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆဲရင်လည်းမိန်းကလေးတွေပါ ဖတ်လို့ ရတဲ့ ဆဲနည်းမျိုးနဲ့ ဆဲကြဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ အပြစ်မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကာတွန်းတွေ၊ သရော်စာတွေနဲ့ ဆဲတာမျိုးကိုတော့ အားပေးပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာလဲ အဲဒီလို လုပ်ကြတာပဲ။ အနုပညာနဲ့ ဆဲနိုင်ရင်တော့ကောင်းပါတယ်။
ခုနက ပြောခဲ့တဲ့ “လူနဲ့ ကျီးကန်း” ဥပမာလိုပဲ ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူတာနဲ့ ခွဒေါင်းလိုစွပ်စွဲတာဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့တဲ့ စွပ်စွဲမှုပါ။ မှာယွင်းပြီးတယောက်ကရေးမိတယ်။ “ကိုယ်က ခွပ်ဒေါင်း၊ သူက ကိုယ်နဲ့ မတူဘူး၊ ဒါကြောင့် သူက ခွပ်ဒေါင်းမဟုတ်ဘူး” လို့ မစွပ်စွဲသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က အဲဒီ့လို စွပ်စွဲတဲ့သူတွေကို ရန်သူလို့ လဲမမြင်ပါဘူး။ ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားလို့ လဲဆက်သတ်မှတ်နေဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် အမြင်ကျဉ်းလွန်းတယ်လို့ တော့ မြင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကို ပြောချင်ပါသေးတယ်။ အဓိက တရားခံဟာ အထက်ဆုံးက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေပါ။ သူတို့ ကိုဦးတည်တိုက်မှ အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ စစ်သားနဲ့ပြည်သူကို ခွဲထုတ်လို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မှန်တယ်။ အမိန့် ပေးတဲ့ သူတွေမှာ အပြစ်ရှိတယ်။ တိုက်ရိုက်အမိန့်နာခံတဲ့ သူတွေမှာလည်း အပြစ်ရှိတဲ့။ အမိန့် ပေးတဲ့သူတွေကို ရာဇဝတ်ကောင်တွေလို့ စွပ်စွဲကြ။ အမိန့် နာခံပြီး ပစ်တဲ့ကောင်တွေကို လူသတ်ကောင်တွေလို့ စွပ်စွဲကြ။
ဒါပေမယ့် ဘာမှမလုပ်သေးတဲ့သူ၊ သူ့ ဘာသာသူ အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ သူတွေကိုတော့ သွားပြီးမတိုက်ခိုက်သင့်ဘူးဗျ။ စစ်သားဆိုတာလည်း ပြည်သူပဲ။ စစ်သားနဲ့ ပြည်သူ ခွဲခြားလို့ မရဘူးဗျ။ သူတို့ ထဲက တဝက်လောက်ပါမလာပဲနဲ့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့ သူတွေကို သွားပြီးတိုက်ခိုက်နေရင် ဘယ်လိုစည်းရုံးစည်းရုံး ကိုယ့်ဘက်ဘယ်ပါတော့ပါ့မလဲ။
တကယ်ဆိုရင် ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း ရုရှက စစ်ဗိုလ်တွေ စစ်သားတွေ $250 ရတာ မကြည်ဖြူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗျာ၊ အဲဒီလို မတရားရနေတာတွေ၊ လာဘ်စားနေတာတွေက စစ်သားကြည့်မှ မဟုတ်ဘူး။ အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းတွေ၊ သစ်တောကဝန်ထမ်းတွေ၊ အင်ဂျင်နီယာ အရာရှိကြီးတွေဆိုရင် တချို့ အဲဒီ့ စစ်ဗိုလ်တွေထက်တောင်ပိုရသေးတယ်။ ပြီးတော့ ပြည်သူကိုနှိပ်စက်တာ၊ စစ်သားချည်းမဟုတ်ဘူး။ ရှေ့ နေတွေ၊ တရားသူကြီးတွေ၊ တခြားအရာရှိကြီးတွေမျိုးစုံပါတယ်ဗျ။ အဲဒီတော့ အဲဒါကိုသာ အပြစ်တင်နေမယ်ဆိုရင် တပြည်လုံးကို အပြစ်တင်ရတော့မယ်။ ကိုယ့်တပ်ကိုယ် ပြန်နင်းရတော့မယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူလုပ်တဲ့သူတွေကို သာ ထောင်ချကြေးဆိုရင် တပြည်လုံးကိုထောင်ချရလိမ့်မယ်ဗျို့ ။ အဲဒီ့ တရားသူကြီးတွေသာ ဗိုလ်မှူးကြီးနေရာရောက်သွားရင်လည်း အခုလို မျိုးလုပ်ကြမှာပဲ။ သေနတ်ကိုင်တာနဲ့မကိုင်တာနဲ့ ပဲကွာမယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်မဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်းနီးပါးမှာ အချောင်ခိုချင်တဲ့စိတ်၊ သက်သာချင်တဲ့စိတ်ရှိတာပဲဗျာ။ အမေရိကန်က လူတွေလဲ ဒီစနစ်နဲ့၅နှစ်လောက်ပေးနေကြည့်ပါလား။ ခုလို အကျင့်ပျက်ကြမှာပဲ။ အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ ကြိုးဆွဲနေတဲ့ သူတွေကို တိုက်ရမယ်။ တိုက်ရိုက်အမိန့် ပေးတဲ့လူ၊ လူစိတ်မရှိပဲ အမိန့် နာခံပြီး ပစ်တဲ့ လူတွေကို တိုက်ရမယ်။ တာဝန်ရှိပြီး ရာထူးကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့သူ မှန်သမျှကို တိုက်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့လို တိုက်တဲ့နေရာမှာ တကယ့် အချက်အလက်မှန်ကို ပဲသုံးပြီးတိုက်ရမယ်ဗျ။ တိုက်စရာ အချက်အလက်မရှားပါဘူး။ သူတို့ တွေ တကယ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ အမှုတွေ အများကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့ ဘက်က အဲဒါတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးရုံပဲ။ မဆိုင်တဲ့ အချက်တွေကို သုံးပြီးတိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။ မဆိုင်တဲ့ အချက်တွေ သုံးပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင် စဉ်းစားတတ်တဲ့လူတွေရဲ့ ပေးတဲ့အမှတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘက်က လျော့သွားပါလိမ့်မယ်။ မတော်တဆမှားတာဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အခက်အခဲတွေကြားက လုပ်ရတာ ဆိုတော့ အမှားတွေပါမယ်ဆိုတာတော့လက်ခံတယ်။ ဒါကို ထောက်ပြတဲ့ သူတွေကလဲ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုမပါပဲထောက်ပြ၊ မှားတဲ့သူကလည်းအသာလေး ပြင်လိုက်ရင် ပြီးပြီ။ ကြားကလူတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေ ပါဖို့ မလိုပါဘူး။
တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ဘက်က တရားမျှတမှုရှိရင်ပိုကောင်းမှာပါ။ မှားတာကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ လူတွေက ခွင့်လွှတ်မှာပါ။ ပြီးတော့ အေးအေးဆေးဆေးနေနေတဲ့ စစ်ဗိုလ်၊ စစ်သားတွေကို အမှန်မြင်လာအောင် ညင်ညင်သာသာပဲ စည်းရုံးသင့်ပါတယ်။ တကယ်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ (သူတို့ တကယ်ကျူးလွန်တဲ့ အမှုတွေနဲ့ ) ပြတ်ပြတ်သားသားတိုက်ကြဗျို့ ။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အရ စစ်ဆင်စရာ တကယ့်အချက်အလက်မှန်တွေ အများကြီးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ဗျာ ရန်သူ နအဖကို ပဲ တိုက်ကြပါဗျို့ ။ အချင်းချင်းမတိုက်ကြပါနဲ့ ဗျာ။ အချင်းချင်းဝေဖန်လို့ တော့ ရပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။ မှားတယ်ထင်ရင် အပေါစားတံဆိပ်တွေလိုက်မကပ်ပဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုမပါပဲ အကျိုးသင့်၊ အကြောင်းသင့် ဝေဖန်ကြပေါ့ဗျာ။ အချင်းချင်း ဟိုဟာဒီဟာတွေနဲ့ မနှိုင်းကြပါနဲ့ ဗျ။
ကိုမိုးထက်နေရေ၊ ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးပဲဗျို့ ။ comment ရှည်သွားလို့ လဲအားနာတယ်ဗျ။ ဒီ comment နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ kaungkinko@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပါ။ ဆဲစရာရှိရင် ကျွန်တော့်ကို တိုက်ရိုက်ဆဲကြဗျို့ ။
ဒီမှာ ဆဲမယ်ဆိုရင် blog ပိုင်ရှင်ကို အားနာလို့ ။ဝေဖန်ရုံသက်သက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်မှာဝေဖန်ဝေဖန်ရပါတယ်ဗျာ။
we all should notice which one is more important, u r right
and also agreed with mr kaungkinko
very good we should follow his idea
ကြာပြီပဲဗျာ ဒါမျိုးစုစည်းသင့်နေတာ. ဆယ့်ကိုးနှစ်ဆိုတာ နည်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး. ဒီလောက်ဥာဏ်တုံးတဲ့ လူတယောက်တောင် ကျနော်တို့အပေါ်ကို တရားမမျှတာစွာ အကြာကြီး မင်းလုပ်နေသေးတာပဲ။ သူထက်အဆတထောင် လောက်တော်တဲ့သူတွေ ကျနော်တို့တိုင်း ပြည်မှာတစ်ပုံကြီး။ ဘာလို့အခုထိ မဖြစ်တာလည်းဆိုတော့ အဲ့ဒီစုစည်းမှုမရှိခြင်း ကြောင့်ဆိုတာ ထင်သာတာပဲ။ အဲ တခုတော့ရှိတာပေါ့ လေ ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေရဲ့ ပင်ကိုယ်စိတ်ဓါတ်ကိုက အေးရာအေးကြောင်းဆိုတော့ အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကို သူတို့က ဆုပ်ကိုင်မိထားတာကိုး။ လူတစ်ရာမှာ ကိုးဆယ်လောက်က ဒီစနစ်ဒီခေါင်းဆောင်မှုကို မကြိုက်ကြတာ ရှင်းတယ် ကျန်တဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ အခွင့်အရေးရလူတွေပဲ ရှိတာပါ။ ဒီလောက် နိုင်ငံသားတိုင်းနီးပါ မကြိုက်တဲ့ စနစ်ကြီးကို အချိန်အကြာကြီးခံစားနေရတယ် ဆိုတော့ အပေါ်က ကိုမိုးထက်နေရေးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မိန့်ခွန်းလိုပဲ အသုံးမကျလို့ဆိုတာ သိသာနေတယ်။ ယေဘူယျအနေနဲ့ အသုံးမကျဘူးဆိုတာ နိုင်ငံသားတိုင်းပါတာပေါ့ဗျာ။ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်တဲ့ အရေအချင်းရှိသူတွေကတော့ ပိုပြီး ဆန်းစစ်လေ့လာသင့်တာပေါ့။ တစ်ခုကျနော့်အမြင် ပြောခွင့်ရရင် ပြောချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီစုစည်းမှုက အခုထိ ဘာလို့မရနိုင်သေးတာလည်း ဆိုရင် (ကျနော့်အမြင်ပါ) တွေ့ရသလောက် စိတ်ဓါတ်နည်းနည်းပိုပြင်းတဲ့သူတွေက အဲ့ဒီ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်တဲ့ အရေအချင်းရှိသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ တဲ့ထိုးပြောရရင် နိုင်ငံရေး လုပ်နေသူတွေတော်တော်များများက စိတ်ဓါတ် ပြင်းတယ်ဗျာ။ မဟုတ်ရင် မခံနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ စိတ်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီစိတ်ဓါတ်က ကွန်ထရိုး မလုပ်မိရင် စုစည်းမှုဆိုတဲ့အပေါ်ကိုပါ သွားရိုက်ခတ်တယ်။ မင်းကဘယ်လောက် နိုင်ငံအတွက် လုပ်ပေးခဲ့လို့လည်း။ ဘာတွေများ စွန့်လွတ်ဘူးလို့လည်း အဲ့လိုပေါ့နော် Adjust မလုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်မျိုးတွေ ရှိလာတော့ တော်ယုံတန်ယုံကတော့ ငြိမရကြတော့ဘူး ထင်တာပဲ။ နောက်တခုက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောရရင် အာဇာနည် ဆိုသည်မှာပေါ့ဗျာ.. အာဇာနည်ဆိုတာ အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည် ပြုလုပ်ထိုက်သည် မထိုက်သည်ကို သိပြီး နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် အရိုးကျေကျေ အရေခန်းခန်း သက်စွန့်ကြိုးပန်း ဆောင်ရွက်သူများဖြစ်ကြသည်ဆိုတော့ကာ နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးအတွက် အရိုးကျေကျေ အရေခန်းခန်း လုပ်နေတဲ့ သူတွေ ကျနော်တို့ဆီမှာ တစ်ပုံကြီးပါ။ အကြောင်းဟုတ်သည် မဟုတ်သည် နဲ့ ပြုလုပ်ထိုက်သည် မထိုက်သည်ကို သိဘို့ကတော့ အရေအချင်းတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ခက်ပါတယ်။ ခက်လို့လည်း အာဇာနည်လို့ ခေါ်သကိုးဗျ။ အဲ့ဒီကိစ္စတွေမပြည့်စုံလို့သာ ကျနော်တို့ ပိန်းလှပါသည်ဆိုတဲ့ ဦးနှောက်မရှိဘူးဆိုတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲ ရှိနေတုန်းပဲလို့ မြင်မိတယ် ဆိုတာ စိတ်ထဲခံစားရတဲ့အတိုင်း မိချောင်းမင်းကို ရေခင်းပြမိပါကြောင်း။ ကျနော်နိုင်ငံရေးကို နားမလည်ဘူးဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်။ နိုင်ငံရေးတောင် နားမလည်တဲ့ လူတယောက်ရဲ့ အမြင်မျိုးလည်း တခါတခါ ဖတ်ရတာ မဆိုးဘူးဆိုတဲ့သဘော နဲ့ ရေးတာပါ။ အပေါ်ကရေးတာက ခံစားမှုသက်သက်ပဲ ဖြစ်လို့ အမှားပါရင်…. အဲ.. ခွင့်လွတ်မနေပါတော့ဗျာ..
AnonymousTesla (မထူးပါဘူး :) )
daung pyo said...
အမှန်ပဲဗျာ။ ပြောသွားပီးခဲ့တာတွေလည်း အများကြီးဆိုတော့ ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။